အပူရှောင်ရင်း ချက်မဲ့ဟင်း | Food Magazine Myanmar
မေလမှာတော့ ဆရာမဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေးက ‘ ဝက်နံရိုး သရက်သီးသနပ်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ် များကတော့ –
၁။ ဝက်နံရိုး သရက်သီးသနပ်၊ အာလူးဟင်း၊ ငါးပိ၊ ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးထောင်း၊ ညောင်ချဉ်ရွက်သုပ်၊ အတို့စုံ၊
၂။ ကြက်သားမဆလာချက်၊ ခဝဲသီးကြော်၊ ပဲနီလေးဟင်းရည်၊ မန်ကျည်းသီးထောင်း၊
၃။ ငါးသလောက်ဥကြော်ချက်၊ ချဉ်ပေါင်ခါးဟင်းရည်၊ ငရုတ်သီးပုစွန်ခြောက်ထောင်း၊
၄။ ဆိတ်သားပဲဟင်း၊ ကင်မွန်းချဉ်ရွက်ကြော်၊ ပဲပင် ပေါက်ပဲပြားသုပ်၊ ငံပြာရည်ဖျော်၊
၅။ ပုစွန်ငါးဆုပ်ချက်၊ ဘူးညွန့်ဖရုံညွှန့်ကြော်၊ ပဲပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးချက်၊ သခွားသီးသုပ်၊
၆။ ငါးခြောက်ခရမ်းသီးနှပ်၊ ကြက်ဥကြော်သုပ်၊ ပဲညွန့်ဟင်းရည်၊ ငါးပိသုပ်၊
၇။ ငါးကြင်းပေါင်း၊ ကင်းမှုံသီးပုစွန်ခြောက်ကြော်၊ ပဲကုလားဟင်း၊ မရမ်းသီးထောင်း၊
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ဝက်နံရိုး သရက်သီးသနပ်၊ အာလူးဟင်း၊ ငါးပိ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးထောင်း၊ ညောင်ချဉ်ရွက်သုပ်၊ အတို့စုံတို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘ဒီအဝတ်အစားနဲ့တော့၊ အပြင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။ စကင်ကတိုပြီး အပေါ်အင်္ကျီကလည်း စွပ် ကျယ်သာသာဆိုတော့’
‘မမကလည်း စကင်က ဒူးထိပြီး၊ အင်္ကျီကလည်း ကြိုးတစ်ချောင်းတောင်မဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေထဲ မှာ ညီမရဲ့ အပြင်အဆင်က အလုံခြုံဆုံးပဲ . . .’
‘အေးပါ အလုံခြုံဆုံးဖြစ်တဲ့ ညီမရော၊ မလုံမခြုံတွေ ကိုရော ပြောချင်ပါရဲ့။ အခုမြန်မာပြည်မှာ မိုးလေဝသ ပညာရှင်တွေရဲ့ ပြောစကားအရဆိုရင်တော့ ဒီ၂ဝ၁၆ ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွန်းကိန်း (၈) ထက် အများကြီးကျော်လွန်ပြီး အညွန်းကိန်း (၁၃) အထိ ရောက်ရှိနေလို့ အပြင်နေပူထဲသွားမယ်ဆိုရင် မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ပခုံးထိ လုံခြုံတဲ့အင်္ကျီအဝတ်အစား၊ ဦးခေါင်း အတွက် ထီး၊ ဦးထုပ်၊ မျက်လုံး အတွက် နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ နေကာမျက်မှန်၊ အဝတ်နဲ့ လွတ်နေတဲ့ လက်ဖျား၊ ခြေဖျား၊ မျက်နှာတွေကို နေရောင်ခံလိမ်းဆေးတွေလိမ်းပြီးထွက်မှ သင့်တော်မယ်လို့ ရေးနေ၊ ပြောနေ ကြတယ်။ အဲ့ဒါတွေမသိဘူး မဟုတ်လား . . . ‘
‘သိပါတယ် မမရဲ့။ အပြင်ရာသီဥတုကပူပါတယ်ဆို အဲ့ဒီလောက် လုံတဲ့ဟာတွေဝတ်ရမယ်ဆိုရင် အပြင် မထွက်တာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် . . . ‘
‘အိမ်တွင်းပုန်းနေလေ။ ဘယ်နှစ်ရက် နေနိုင်မလဲ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့’
‘ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်သွားပြီး အလုပ်ခန်းထဲဝင်မှာ များ ဘယ်လောက်နေပူမိမှာ မို့လို့လဲ . . . ‘
‘ကားပေါ်မှာပဲ နေပူမိတာလေ။ ကားထဲကို နေရောင် ခြည်မဝင်ဘူး အောက်မေ့ လို့လား။ ကားလမ်းကပိတ်တော့ အနည်းလေး တစ်နာရီတော့မိမှာပဲ . . .’
‘ဒါဆိုလည်း မသွားဘူး။ မမ ချက်ကျွေးတာစား လိုက်၊ အိပ်လိုက်လုပ်မယ်။ အခုရော ဟင်းကျက်ပြီလား ထမင်းစားမယ်’
‘အမယ် ပြောတတ်တယ်။ ရတဲ့လခက သိန်းဆယ် ချီပေမဲ့၊ မီးဖိုထဲကိုများ ဘယ်လောက်ပံ့ပိုးထားလို့လဲ၊ ဝါသနာပါလို့ရယ်၊ မောင်ညီမတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စားပါစေလို့ဆိုတဲ့ စေတနာကိုတော့ အဲဒီအသံမျိုးနဲ့ လာ မလုပ်နဲ့ . . . ‘
Sorry ပါ မမရာ။ အဲ့ဒီလို မရည်ရွယ်ပါဘူး။ မမရဲ့ မေတ္တာတွေ၊ အကြင်နာတွေ ညီမတို့ ခံစားပြီးသားပါ။ ဒီမှာ အမကြီးအမိရာဆိုတာ မမမှအစစ် အစစအရာရာ ပူပန်ပေးတာ ဆုံးမပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟင်းတွေ မချက်ရသေးရင် ညီမလေး ကူချက်ပေးမယ်။
‘ကိုယ့်ဖာသာကိုသာ အကုန်ချက်စား၊ ဝက်နံရိုးဝယ်ထားတယ်။ အာလူးလည်းရှိတယ်။ မေမေညောင်ချဉ်ဖူး ကြိုက်လို့ သုပ်ဖို့ဝယ်လာတယ်။’
‘အဲဒါတွေကို ဟင်းဖြစ်အောင်ချက်ရမယ်ပေါ့။ မမ လုံးဝမပါဘဲ ညီမလေးချက်မယ်။
ဝက်နံရိုးကို အိမ်မှာအမြဲရှိတဲ့၊ သရက်သီးသနပ်နဲ့ ချက်မယ်။ အာလူးကိုနှပ်လိုက်မယ်။ ညောင်ချဉ်ဖူးကတော့ အသုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုလည်း အသုပ်ပေါ့။
ဝက်နံရိုးငါးဆယ်သား၊ လက်နှစ်ဆစ်လောက် ပိုင်း ဖြတ်ထားတာကို ရေစင်စင်ဆေး၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ ငါးပိ စိမ်းစား၊ ကွမ်းသီးလုံးတစ်ဝက်စာ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ခရုဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ အားလုံးရောနယ်ပြီး ဆယ်မိနစ်နှပ်ထားမယ်။
ချက်မယ်ဆို ဆီငါးချက်သားထဲကို ကြက်သွန်နီ နှစ်ဥကြီးကြီး၊ ချင်းလက်မ တစ်ဆစ်စာ၊ ငရုတ်သီးပွရေစိမ် သုံးတောင့် ညက်အောင်ရောထောင်းထားတဲ့ အဆာတွေ နဲ့ ဆီသတ်ပါမယ်။ ကြက်သွန်နီဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင် တောက်ပြီး ဆီပေါ်ပေါ်လာရင် နယ်ထားတဲ့ ဝက်သားထည့် လုံးမယ်။ ဝက်သားထဲပါတဲ့ အရည်ခန်းပြီး ဆီပြန်လာရင် သရက်သီးသနပ် စတီးဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်းစာနဲ့အတူ ရေ တစ်ဆယ်သား နှစ်ခွက်ဖြည့်ပြီး အဖုံးအုပ်တည်မယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက် ပွက်ဆူလာရင် ကြက်သွန်နီဥသေး ခုနစ်လုံး ရှစ်လုံးထည့်မယ်။ ရေနည်းရင် ရေထပ်ဖြည့်ပြီး ဝက်နံရိုးက အသားတွေနူးအောင်တည်မယ်။ အားလုံး ကျက်ပြီး ဆီပြန်လာရင် အပေါ့အငန် အရသာအနေ တော်မြည်းကြည့်မယ်။ ဒါဆို နွေရာသီနဲ့လိုက်တဲ့ အချဉ် ဓာတ်လေးပါတဲ့ အအီပြေဝက်နံရိုးသရက်သနပ်ဟင်း ရပါပြီ။
အာလူးနှပ်အတွက် ရခိုင်အာလူးနှစ်ဆယ်သား၊ ရေ စင်စင်ဆေးပြီး ကျက်ရုံပြုတ်၊ အခွံနွှာ၊ အနေတော်ပိုင်း ဖြတ်မယ်။ ဆီနှစ်ကျပ်ခွဲသားထဲကို ကြက်သွန်ဖြူငါးတက် ဓားပြားရိုက်၊ ဆီသတ်မယ်။ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ ဝါလာရင် နနွင်းအနည်းငယ်ထည့်ပြီး အာလူးထည့်မယ်။ ဆား၊ အရသာ၊ သကြားအနည်းငယ်စီ ဖြည့်ပြီး အာလူးတွေ နူးနပ်သွားအောင်တည်မယ်။ ဆီများများကြိုက်ရင် ပိုထည့် လို့ရပါတယ်။ အာလူးဆီပြန်လာရင် ကြက်သွန်နီကြော် စတီးဇွန်းနှစ်ဇွန်းထပ်ဖြည့်လိုက်ပါ။ အာလူးနှပ်ရပါပြီ။
ညောင်ချဉ်ဖူးသုပ်အတွက်၊ ညောင်ချဉ်ဖူးပြုတ်ပြီး သား တစ်ဆယ်သား၊ မပြုတ်ရသေးတဲ့ ညောင်ချဉ်ဖူးဆိုရင် လည်း ရေနွေးဆူဆူမှာ ထည့်ပြုတ်ဖို့ပါပဲ။ အရိုးအညှာအ ရင့်တွေဖယ်ပြီး၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီး၊ ကြက်သွန်စိမ်းတစ်ဥ စာ ပါးပါးလှီး၊ ရေဆေးပြီး၊ ဆား၊ အရသာနည်းနည်းစီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီချက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးချက်အနှစ်၊ စတီး ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်း၊ ပဲပုပ်အမှုန့်၊ မြေပဲထောင်း၊ နှမ်းထောင်း အားလုံးရောထည့်ပြီး ဖွဖွနယ်လိုက်ရင် ညောင်ချဉ်ဖူးသုပ် ဖြစ်ပါပြီ။
အငန်အတွက် အိမ်မှာအမြဲရှိနေတဲ့ ငါးပိကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးပုစွန်ခြောက်တွေနဲ့ ရောထောင်းထားတဲ့ ငါးပိထောင်းထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ စေတနာ၊ ဝါသနာတွေ အရင်းခံပြီး မီးဖိုဆောင်မှာ ချက်ပြုတ်နေတဲ့သူတွေဟာ၊ နေ့ရှိသ၍ မီးပူရဲ့ အငွေ့၊ ဆီပူတွေက ထွက်တဲ့ အညှော် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အနံ့အသက်၊ အဲဒါတွေအားလုံးကို အိမ်သားတွေ စားကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်ထား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စေတနာတွေ ဖုံးလွမ်းပြီး အပူဆိုတာကို ရှောင်ဖို့မစဉ်းစားဘဲ၊ နေ့စဉ်အပူခံနေကြသူတွေပါ။
♦ ညောင်ချဉ်ဖူး – ၁ဝ သား (ပြုတ်ပြီးသား)
♦ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ဆီချက် – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ဆား/အရသာမှုန့် – အနည်းငယ်
♦ ပဲပုပ်အမှုန့်/မြေပဲထောင်း/နှမ်းထောင်း – အနည်းငယ်စီ
♦ ဝက်နံရိုး – ၅ဝ သား
♦ သရက်သီးသနပ် – စတီးဇွန်းကြီး ၁ ဇွန်း
♦ ကြက်သွန်နီ – ၂ ဥ (အကြီး)
♦ ငါးပိစိမ်းစား – ကွမ်းသီးလုံး တစ်ဝက်စာ
♦ ပဲငံပြာရည်အကြည် – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ရေ – ၂ ခွက် (တစ်ဆယ်သားခွက်)
♦ ကြက်သွန်နီအသေး – ၇ လုံး
♦ ရခိုင်အာလူး – ၂ဝ သား
♦ ကြက်သွန်နီကြော် – စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်း